QEERROO ‘ABDIISAA BAANCAA’ JEDHAMUUN WALBARAA! – YEROOBLOG
QEERROO ‘ABDIISAA BAANCAA’ JEDHAMUUN WALBARAA!
Yerooblog	Freedom of Expression, News & Views, Oromia &Ethiopia	 February 13, 2016 February 13, 2016 4 Minutes
Abdiisaan Ogeessa koompiwutaraa(IT Specialist/Programmer/App Developer) yommuu ta’u, Barnoota koompiwuutaraatiin(Information Technology)dhaan xumura bara 2013,Yuunbaristii Haramayaa irraa eebbifame. Hojiisaarraa ka’uun namootni hedduu Abdiisabaa jedhuun. Abdiisaan eebbasaa booda boqannaaf gara maatiisaa kan deeme yoo ta’u turtii ji’alamaa booda Kaampaniin Moosajii(Software Company) kan lammummaan isaa nama USA tokko hojiidhaaf yaame. Abdiisaan gaaf sanarraa kaasee dhimma jireenya dhuunfaa lafa kaayee, saba kootiif maal gumaacha,Ogummaa kootiin maal fayyada, yaada jedhutti seene.
1) Fayyadamaa Mobaayilaa(Mobile App) maqaa “Afaan Oromoo Baradhaa” jedhuun Google Play Store irratti gad lakkise. Fayyadamaan(Appn) kun seerluga Afaan Oromoo kan barsiisu yommuu ta’u qabiyyee boqonnaa torba( Qubee A,B, C… irraa kaasee hanga Sirna Tuqaaleetti) kan of keessaa qabuudha.
2) Ammas osoo hin turin Fayyadamaa Mobaayilaa(Mobile App) maqaa “Qubee Afaan Oromoo Sagaleen.” jedhu gad lakkisuun Hawaasni addunyaa guuturra jirtan daa’imarraa hanga guddatti jalqabarraa kaasaa baradhaa, amma booda Afaan Oromoo iddoon itti baradhu dhabe namni jedhu akka hin jiraanne jedhe Abdiisaan.
3) Abdiisaan Sab-qunnamtii hawaasummaa irrattis keessattii Facebook Gubbatti Garee “Afaan Oromoo Haa guddifnu! ” jedhu ijaaree kan miseensa namoota 8000 ol qabu irratti guyyaa guyyaan Qubee irraa eegalee dhimmi guddinni Afaan Oromoo yeroo hunda kan irratti barsiifamu too’achaa jira.
4) Hawaasni addunyaa garagaraa Abdiisaa wajjiin walbaruu jalqaban, Gaafiin barnoota Afaan Oromoo nu barsiisuu qabda jedhu hedduumachaa dhufe. Abdiisaan tole jedhee fudhate, Garee Whatsup “Afaan Oromoo Haaguddifnu!” jedhu uume Barnoota Afaan Oromoo Qubeerraa jalqabuun barsiisutti seene. Gareen kun yeroo muraasatti miseensa hanga nama dhibbaa horate. Abdiisaan rakkoolee fi bu’aa ba’ii jireenya dhuunfaa dagatee barnoota kanarratti xiyyeeffatee ji’a 4-5tti miseensotni garee kanaa. Haala kanaan turtii ji’a 4-5 keessatti miseensotni garee kanaa dubbisuu, barreessuu, dubbachuuf dubbisuu xumuran. Kanaanis Abdiisaan hojii boonsaa hojjate Miseensa Gammachiise.
5) Ammas itti fufuun Abdiisaan wanta murteessaa fi barbaachisaadha jedhe torbaanuma keessa jirru kana Fayyadamaa Moobaayilaa(Mobile App) maqaa “Jechoota Hayyoota Oromoo” jedhu kan jechoota hayyoota 80 ol of keessaa qabu kinoo gad lakkisee jira.
6) Maal kana qofa Abdiisaan Hojii ijoo tokko qabatee dhufeera. Innis dhaadannoo ganamaa tan “Afaan Oromoo Afaan saayinsiif teekinoolojii haa taasifnu!” jettu sana gara “Dhimma keenyaaf teenyee nama biraa eeguun salphina!” jedhutti jijjiirrun dhimma guddina Afaan Oromoo irratti sochii garagaraa gochuu irraan darbee dargaggoota heddu kakaaseera, bu’uura afaan kanaa lafa kaayuu qabna jedhee bu’aa bahii heddu ce’ee bahaa ture, kanaanis garee adda addaa lama ijaaree jalaa jigus/ bittannooftus, har’a garee sadaffaa maqaa “Qubee Technologies” jedhuun kan miseensa dargaggoota sha(5) of keessaa qabu ijaaree hojitti seenanii jiru.
1. Afaan Oromoo iddoo fi yeroo barbaadametti argachuuf akka danda’amu gochuu, itti fayyadamsiisuu, hordofuuf too’achuu.
2. Afaan Oromoo bifa barbaadameen:
3. Dogoggora asiin dura ture kanneen barreeffamaan Google irra jiran sirreessuu, Hedduun kan oli hin kuufamin waan ta’eef olkuusuu.
Namoota ykn Company Abdiisaa Bancaa Qunnamuu barbaaduuf:
Name: Abdisa Bencha Jara
Title: Information Technology(Bsc)
Position: IT Specialist(Junior Programmer/App Developer)
Facebook: Abdiisaba Oromoo
Mob: +251911527293 / +251910130926
Twitter: Abdiisaba Oromoo (@abdisabnch39)
1. Dargaggoo Oromoo kallattii garaagaraan bu’aa saba isaaniitiif dalagan yeroo yerootti seenaa gabaabaa isaan qaban faana beeksisuukoo kanan itti fufu ta’a!
2. Oromoon kamuu qixa irra jiruun yoo waan danda’u dalage tarkaanfii qabsoo keenyaaf gumaacha guddaadha!
3. Guddina Afaanifi aadaa Oromoof hojjennee kanarra Wayyaanee maraachina!
= = = = == = = = = = = = = = = = = == = =
Kan Barreesse: Beekan Gulummaa Irranaa
Previous Post Haile Gebresilassie says ‘Democracy is a luxury for Africans’
Next Post Arsii Lixaa Keessatti Fincilli Diddaa Gabrummaa Adeemsifamaa Jira.
One thought on “QEERROO ‘ABDIISAA BAANCAA’ JEDHAMUUN WALBARAA!”
March 14, 2016 at 08:14
AFAAN OROMOO AFAAN WALIIGALTEE ADDUNUNYAA NI TA’A!!